DRK-FX-D302B Qaboojinta-Biyo La'aanta Kjeltec Azotometer
Iyada oo ku saleysan mabda'a habka Kjeldahl, Azotometer ayaa lagu dabaqayaa go'aaminta borotiinka ama wadarta guud ee nitrogen, quudinta, cuntada, abuurka, bacriminta, muunadda ciidda iyo wixii la mid ah.
DRK-FX-D306 Nooca Sox Nooca Soo Saarka Dufanka 8 Kanaal
1. Qalabku wuxuu isku darayaa shaqooyinka muhiimka ah sida kuleylka iyo xakameynta heerkulka, soo saarida, soo kabashada dareeraha, iyo qalajinta kahor, taasoo sahleysa in la sameeyo tijaabooyin. 2. Xaqiiji geedi socodka oo dhan ee soo saarista kululaynta kulul, kululaynta laba jeer dhalada aruurinta iyo qolka soo saarista
Dusha muraayadda dhoobada, iska caabinta heerkulka sare iyo ahama. (Dusha sare ee leh dahaadhka Teflon uma adkaysanayo heerkulka sare; in kasta oo dusha sare ee birta aan xaddidnayn u adkaysto heerkulka sare, way fududahay in miridhku ka baxo).
Musalsalka taxanaha qiiqa
Qiiqa qiiqa waa qalab shaybaar caadi ah oo loo isticmaalo shaybaarada oo u baahan in laga saaro gaasaska waxyeellada leh, wuxuuna u baahan yahay in la nadiifiyo lagana saaro inta lagu jiro tijaabada.
Nooca miiska taxane-nadiif ah oo nadiif ah
Kaydka nadiifka ahi waa nooc ka mid ah qalabka isdaahirinta qayb ahaan loo isticmaalo deegaanka nadiifka ah. Isticmaal habboon, qaab-dhismeed fudud iyo karti-sare. Si ballaadhan ayaa loogu isticmaalay elektarooniga, qalabaynta, farmasiga, optics-ka, dhaqanka unugyada dhirta, machadyada cilmi-baarista iyo shaybaarada, iwm.
Vertical socodka ultra-nadiif ah taxane workbench
Jaangooyooyin isdabajoog ah oo toosan oo laba-ujeeddo ah oo nadiif ah oo shaqeynaya
Naqshadeynta bini-aadamka ayaa si buuxda u tixgelineysa baahida dhabta ah ee isticmaaleyaasha. Marka loo eego qaabdhismeedka miisaanka miisaanka culus, albaabka muraayada ah ee daaqadda qalliinka ayaa loo dejin karaa si aan macquul ahayn, taasoo ka dhigaysa tijaabada mid ku habboon oo fudud.
Taxanaha DRK-ER ee kululaynta korantada taxanaha saxanka kululaynta saxanka
★ 1.Bedelashada tamarta ee laga keeno Talyaaniga waa la qaatay. ★ 2. Qaab dhismeedka xirfadeed wuxuu siyaadiyaa xawaaraha kuleylka. ★ 3. Qaab dhismeedka xirfadeed wuxuu kordhiyaa xawaaraha kuleylka. Isku dheelitirka ballaarinta hoose ee muraayadaha-dhoobada wuxuu hubiyaa in dusha sare ee sita uusan ku beddelmi doonin xaaladaha heerkulka sare. 5: 316L ahama ayaa loo isticmaalay agagaarka sheyga si loo hubiyo in qayb kasta oo ka mid ah mashiinka oo dhan uu leeyahay caabbinta daxalka qaarkood. Soo saaraha kululaynta korontada ...
Horizontal qulqulka taxane-nadiif ah oo nadiif ah
Foornada korontada xiran
1 Talyaanigu wuxuu soo dajiyay isbadalka tamarta. Naqshadda xirani waxay ka hortagtaa ololka furan waxayna hagaajisaa heerka badbaadada. Hoob bir ah si looga fogaado astaamaha jilicsan ee lebenyada soo noqnoqda ee jirka Foornada iyo siligga kululaynta waxaa lagu shaabadeeyey dhimasho, taas oo si weyn u wanaajinaysa waxtarka kuleylka